ဆိုင်ခွဲစစ်ဆေးရေး Archives - Glory Assumption Space
1. ဆိုင်ခွဲစစ်ဆေးရေး - Male (5) Posts / လစာ- ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)/ သာကေတမြို့ နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော FMCG Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။(ဘာသာခြား Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ 1. ဆိုင်ခွဲစစ်ဆေးရေး - Male (5) Posts / လစာ- ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)/ သာကေတမြို့ နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အစားအသောက်နှင့်ပတ်သက်သော Diploma (or) Certificate ရှိရမည်။ - အသက် (၃၅) နှစ် မှ (၄၅) နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ - Computer ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - English4Skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Restaurant Manager အတွေ့ အကြုံ (၃) နှစ်ရှိရမည်။ - နိုင်ငံခြားတွင် Restaurant Manager အတွေ့ အကြုံ ရှိသူ , ကားမောင်းတက်သူဦးစားပေးမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09 977397705, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
1.ဆိုင်ခွဲစစ်ဆေးရေး - Male (5) Posts / လစာ- ၄၀၀,၀၀၀ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / သာကေတမြို့နယ်။
- အသက် (၃၅ မှ ၄၅) နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည်။
-အစားအသောက်ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်သော ဒီပလိုမာ (သို့) သင်တန်းတစ်ခုခု ပြီးထားသူဖြစ်ရမည်။
-စားသောက်ဆိုင်မန်နေဂျာအဖြစ် အတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်နှင့် အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
နိုင်ငံခြားတွင် စားသောက်ဆိုင်မန်နေဂျာအဖြစ် အတွေ့အကြုံရှိသူ၊ ကားမောင်းတတ်သူဦးစားပေးမည်။
-အင်္ဂလိပ်စာ ရေး၊ ဖက်၊ ပြော ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရမည်။